Imiyalo emi-3 yeZero Waste | Bezzia
Imiyalo emi-3 yeZero Waste
UToñy Torres | 02/10/2021 10:00 | Ikhaya
Eminyakeni ethile kube nomkhuba wokuvikela imvelo obizwa ngeZero Waste, oqukethe ukunciphisa udoti owenziwa nsuku zonke. Ezenzakalweni eziningi zansuku zonke kungenzeka ukunciphisa okwenzeka emvelweni ukuthi isakhamuzi ngasinye seplanethi sikhiqiza. Okuthile kuze kube kungekudala bekuyinto engajwayelekile kubantu abaningi.
Ngenhlanhla, nokho, abantu abaningi ngokwengeziwe bajoyina le ndlela yokuphila eluhlaza, enobungani bemvelo futhi eqhubekayo. Ngakho-ke uma ufuna ukungena kule nhlangano lokho ngenxa yokuxhumana nomphakathi inabalandeli abaningi ngokwengeziwe, kufanele wazi ukuthi yiziphi izinsika eziyisisekelo zale filosofi yemvelo. Le yimiyalo yeZero Waste.
1 Yini iZero Waste?
2 Imiyalo kaZero Waste
2.1 Ungaqala kanjani
Yini iZero Waste?
Ukuqonda ngendlela elula nelula ukuthi iqukethe ini iZero Waste, ungacabanga ukuthi abantu babephila kanjani emashumini ambalwa eminyaka adlule. Lapho le ndlela yokuya kubathengi yayingekho, nini yonke into isetshenziswe kabusha kwaze kwaba yilapho kungasekho amathuba, lapho kwathengwa kuphela okwakudingeka. Ngaleso sikhathi kwakwenziwa ikakhulukazi ngoba yindlela umphakathi wesikhathi esasisebenza ngayo.
Amathuba ezomnotho nezinketho zaziphansi kakhulu kunanamuhla, kepha ngaphandle kokukwazi, umphakathi emuva ngaleso sikhathi wawunenhlonipho enkulu kakhulu nemvelo. Kwaveliswa imfucuza encane futhi okwenzeka emvelweni kwakuphansi kakhulu kunanamuhla. Ukukunika umbono, ngenyanga ka-Agasti walo nyaka izinsiza ezazenzelwe unyaka wonke zaphela. Okuthile emashumini ambalwa eminyaka adlule kwakungacabangeki futhi ngaphezu kwakho konke, kwakungadingekile.
Imiyalo kaZero Waste
Ngokubanzi, ukunyakaza kweZero Waste kuqukethe ukushintsha kokuthinta kwansuku zonke okulula, lapho inani lemfucuza elenziwa usuku ngalunye ngumuntu ngamunye lingehliswa kakhulu. Funda ukuphila ngendlela esimeme futhi uzobe unesandla empini yokulondoloza iplanethi, ukushiya izizukulwane ezizayo umhlaba ohlanzekile ozohlala kuwo.
Le yimiyalo eyinhloko yeZero Waste:
Nqaba: Ezindlini eziningi ungathola izinto ezingapheli ezithengwe ngokuthanda kwakho, ngaphandle kokudingeka ngempela. Okuthile okunengqondo ngokuphelele uma ucabanga ngokukhangisa, okuya ngokuya kukumangalisa futhi kuyela ngasocansini, okuholela kukho thenga futhi uthenge ngaphandle kokucabanga ukuthi ngabe yini into oyidinga ngempela. Lokhu kunqwabelana kwezinto ezingenangqondo, ngaphezu kokuthatha isikhala ekhaya, kususa amandla, imali futhi kuthathe inani elikhulu lezinsizakusebenza nodoti. Funda ukwenqaba konke okungadingekile futhi uzothola ubumnandi bokuba nezinto ezikuthokozisa ngempela.
Phinda usebenziseIzinto eziningi zingasetshenziswa kabusha, ngaleyo ndlela kuncishiswe kakhulu inani lemfucuza. Sebenzisa izikhwama zendwangu nezinto ezenziwe kabusha ukwenza ukuthenga kwakho, khetha imikhiqizo eningi ukuze ungathwali iziqukathi zepulasitiki futhi ngezifiso izingubo ukuthi awusathandi ukuyinika ukuthinta kwamanje.
Nciphisa: Akudingekile ukuba kube nzima kakhulu, noma ukhethe ubuncane ngendlela eqinile. Ungaqala ngokunciphisa izingubo ekhabethe noma imikhiqizo yama-pantry engeke isetshenziswe. Funda ukuthenga ngokucabangayo, ngoba umfutho yinto yokuqala yokulawula ukuba yiZero Waste.
Ngokuthinta okuncane ungaqala ukuhlala ngendlela eqhubekayo. Khetha imikhiqizo eyinqwaba noma ehlanganisiwe engenazo iziqukathi zepulasitiki. Thola ubuhle benkomishi yokuya esikhathini ngokumelene nemikhiqizo yenhlanzeko yabesifazane. Funda ukuthunga, ukuhlobisa noma ukuluka futhi ujabulele izinzuzo zalo mkhuba ovuselelwa ukugcwalisa amakhabethe ngezingubo ezenziwe ngezandla.
Futhi okubaluleke kakhulu, hlela kahle ukuthenga kwakho ngakunye kahle kakhulu ukuze izinsiza zisetshenziswe ngokuzibophezela. Hlela uhlu lokuthenga bese uthenga kuphela ukudla okuzodinga ukulungisa ukudla kwesonto. Bheka kahle izingubo zakho ngaphambi kokushiya izitolo, gwema ukulingeka ukuba uthenge uma kungenzeka futhi ngaphezu kwakho konke, thola ubumnandi bokuphila ngezinto ezingabalulekile kodwa ezibaluleke kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Imiyalo emi-3 yeZero Waste
Amakhambi okudambisa i-plantar fasciitis
Yikuphi ukudla okubi kakhulu ezinganeni